I-Filezilla: Iklayenti elihle kakhulu le-FTP elinenguqulo entsha etholakalayo Kusuka kuLinux
FileZilla kuyinto enhle «cliente FTP» mahhala futhi mahhala nge inguqulo entsha iyatholakala ngalokhu kuphela konyaka we-2019. inombolo yenguqulo «3.46.3» ikhishwe ngomhla ka-23/12/2019 ukufaka izinguquko nokulungiswa kwamaphutha amancane. Futhi mahhala, kusho ukuthi yisoftware «Código Abierto» isatshalaliswa mahhala ngaphansi kwemigomo ye Ilayisense Yomphakathi Jikelele ye-GNU.
Ngaphezu kwalokho, ayikwazi ukuxhasa kuphela i- «protocolo FTP», kepha «FTP sobre TLS (FTPS) y SFTP». Futhi, kuza ngokuhluka okukhokhelwayo ngokusekelwa okungeziwe kwe- Iphrothokholi yeWebDAV, i-Amazon S3, i-Backblaze B2, iDropbox, iMicrosoft OneDrive, i-Google Drayivu, iMicrosoft Azure Blob kanye nokuGcinwa kweFayela kanye ne-Google Cloud Storage. Futhi ngaphandle kwenguqulo yeklayenti, kuletha inguqulo yeseva, i- «FileZilla Server», enikeza okuhle kakhulu «servidor FTP y FTPS» de «Código Abierto».
Kuzo zombili izinhlobo, iklayenti neseva (i-FTP, i-FTPS ne-SFTP), FileZilla iza ngefomethi ipulatifomu eminingi. Ngaphezu kwalokho, iyi- isicelo esheshayo nethembekile, okuletha nezici eziningi eziwusizo kanye nefayela le- isikhombimsebenzisi esibonakalayo sokuqhafaza.
Futhi ngiyabonga ukusekelwa okuhle kakhulu nokukhulu okusemthethweni nokwasemphakathini ihlelwe ngezinkundla nama-wikis, kanye nokuthi kungenzeka kube nezinqubo ze-bug tracker nezicelo zesici, kanye ne-a imibhalo ephelele futhi enembile ukwakheka kwe- FileZilla enye yamakhasimende we-FTP wamahhala futhi athandwa kakhulu.
1 I-Filezilla: Iklayenti elihle kakhulu lamahhala le-FTP
1.2 Yini okusha kuhlobo 3.46.X series
1.2.1 2019-12-23 - Iklayenti leFayileZilla 3.46.3
1.2.2 2019-12-20 - Iklayenti leFayileZilla 3.46.2
1.2.3 2019-12-20 - Iklayenti leFayileZilla 3.46.1
I-Filezilla: Iklayenti elihle kakhulu lamahhala le-FTP
Phakathi kwezici ezijwayelekile ze FileZilla njengohlelo, singasho labo abachazwe ngezansi:
Kuyisoftware yomthombo ovulekile.
Kuyinto elula ukuyisebenzisa, esheshayo nethembekile.
Kubandakanya ukusekelwa kwamaphrothokholi we-FTP, FTPS ne-SFTP.
Iza ngefomethi ye-multiplatform: Windows, Linux, * BSD, Mac OS X, phakathi kwabanye.
Kubandakanya ukusekelwa kwe-IPv6, HTTP / 1.1, SOCKS5, ne-FTP-Proxy, phakathi kwezinye izivumelwano eziningi.
Itholakala ngezilimi eziningi, kufaka phakathi isiNgisi neSpanishi.
Isekela ukuqalisa nokudluliswa kwamafayela amakhulu, kuze kufike ku-4GB.
Inomphathi onamandla futhi osebenzayo wamaSayithi nokudluliswa kolayini.
Yenza ukuhlunga igama lefayela nokusesha okukude kwefayela.
Ine-interface yomsebenzisi enembile, enamathebula ngokuhudula bese uphonsa ukwesekwa, kanye nesilekeleli sokusetha inethiwekhi.
Ixhasa ukuqhathanisa kwesiqondisi, ukuhlelwa kwefayela elikude, ukubekisa amabhukhimakhi, ukusetha imingcele yejubane lokudlulisa, nokuphequlula isiqondisi okuvumelanisiwe
Yini okusha kuhlobo 3.46.X series
Nazi izilungiso nezinguquko ezenzeke kunguqulo ngayinye yochungechunge lwe-3.46, kusuka kwamuva kakhulu kuya kweyokuqala:
2019-12-23 - Iklayenti leFayileZilla 3.46.3
I-SFTP: Isibambo esihleliwe sivele ku-Windows
I-SFTP: Imizila yesilawuli kude ayixazululwanga ngokuphelele kuyo yonke imisebenzi
2019-12-20 - Iklayenti leFayileZilla 3.46.2
I-SFTP: Kulungiswe ukuxhumeka kokuhlehla kusetshenziswa ifayili lokhiye elivikelwe ngephasiwedi
2019-12-20 - Iklayenti leFayileZilla 3.46.1
Kulungiswe isiphazamiso ezingeni leseva le-FTP lapho kuthunyelwa imigqa yokuphendula emide kakhulu.
Ukwakha nokusebenza kweFayileZilla manje kuya nge-libfilezilla> = 0.19.3 (https://lib.filezilla-project.org/), lokhu kulungisa ezinye izingqinamba nekhodi entsha ekhawulela ikhodi.
Izingxenye ze-SFTP zibuyekeziwe futhi manje zisuselwa ku-PuTTY 0.73.
Nota: Ngeminye imininingwane noma imibhalo ku- FileZilla, noma ukulanda amafayela wakho wokufaka asesikhathini ongavakashela ifayela lakho le- Iwebhusayithi esemthethweni.
Sithemba ukuthi ukhona "okuncane kodwa okuwusizo" mayelana naleli klayenti le-FTP lamahhala elibiziwe «Filezilla», manje enenguqulo entsha, inombolo «3.46.3», yiba nentshisekelo nokusetshenziswa okuhle, kwayo yonke «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» kanye negalelo elikhulu ekusabalalisweni kwesimangaliso semvelo, esikhulu futhi esikhulayo sokusebenzisa kanye nokwenzelwe «GNU/Linux».
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » I-Filezilla: Iklayenti elihle kakhulu lamahhala le-FTP elinenguqulo entsha etholakalayo
… Akukho okufana nokusebenzisa ibhokisi le- / nautilus; ngokubukeka kungcono kakhulu futhi kulula ukuphatha yonke into!
Sanibonani, Cesar! Kuyancomeka impela ukusebenzisa izinsiza zomdabu zezinhlelo zokusebenza esezivele zivela kwi-GNU / Linux Distros yethu. I-Filezilla yenzelwe lapho udinga izici eziningi zokuxhuma ze-ftp noma usujwayele ukwenza okungaphezulu kokuxhuma, ukukopisha noma ukulanda amafayela nge-ftp. Kepha ngamafuphi, iFayilezilla iyithuluzi elihle kakhulu leSoftware endaweni yayo.